Tongasoa Delivra Mpanohana Blog Marketing Email! | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 3, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Ity dia volana iray sarotra ary volana tsy mampino ho an'i Martech! Nakatonay ny volana septambra tamin'ny fitomboana 233% tamin'ny septambra lasa teo tao amin'ny bilaogy ary manohy mahazo fampahalalana an-taonina maro izahay. Miaraka amin'ny mpanohana ny haitao Zoomerang (tsidiho izy ireo ho torohevitra amin'ny fanadihadiana an-tserasera!), faly izahay manambara an'i Delivra ho mpanohana ny mailaka marketing!
Delivra dia iray amin'ireo voalohany orinasa marketing mailaka ary vao haingana no voatondro ho an'ny Inc. 5000! Ny valisoa dia manaiky ny fahafahan'i Delivra mamokatra fidiram-bola matanjaka rehefa mitantana orinasa mitombo sy mampivoatra paikady orinasa mahomby.
Fotoana tsy mampino ho an'ny Delivra sy Martech Zone. Niorina tamin'ny taona 1999, Delivra dia manana anarana miavaka amin'ny orinasa amin'ny maha orinasa azy miahy ny mpanjifany ary manao ny tsara foana. Delivra dia asa tsy misy trosa, fananana manokana sy miasa miorina ao afovoan'i Midwest - ary ireo soatoavina ao an-trano fahamarinana, tsy fivadihana ary miasa mafy manenika ny fandaminana. Tsy manana olona mpivarotra mahery setra izy ireo ... manamboninahitra mpiahy fotsiny izay manome antoka fa voakarakara ny zavatra ilainao ary fenoina ny filanao varotra mailaka.
Afaka herinandro vitsivitsy dia hifindra any amin'ny Delivra ny mailaka fanaontsika isan-kerinandro (hisoratra anarana etsy ambony) ary mety hitady hanao fampidirana mangatsiaka miaraka amin'izy ireo izay havoakanay amin'izao tontolo izao! Ary koa, manana mpamaham-bolongana Delivra vitsivitsy isika izay hitondra toro-hevitra amin'ny marketing amin'ny mailaka sy fomba fanao tsara indrindra!
Raha orinasa teknolojia marketing ianao ary liana amin'ny mpanohana miaraka aminay, mbola manana fantsona misokatra ihany izahay: Analytics, CRM, Ecommerce, Marketing finday, Social Media, Content Marketing, ary WordPress misokatra ny sponsorship!
Fikarohana momba ny tsena mora azo avy amin'ny Tools Market
3 Okt 2011 amin'ny 4:47 PM
Misaotra, Doug! Faly izahay hiaraka amin'ny fianakavian'i Marketing Tech!
3 Okt 2011 amin'ny 4:52 PM
Hey! Fantatro ianao… 🙂
Oct 4, 2011 amin'ny 9: 14 AM
Vondron'olona tsara be any Delivra! Faly mahita anao miara-miasa amin'izy ireo Doug. Manantena ny hahita ny valiny farany…